Uncategorized Archives - Amawpyay
သင့်အရေပြား ယားယံနေတတ်ပါသလား အသားအရေ မကြာခဏ ယားယံခြင်းဟာ အလွန်စိတ်ညစ်ညူးစေကြောင်း ကြုံဖူးသူတိုင်း သိကြပါတယ်။အထူးသဖြင့် အခုလို နွေရာသီမျိုးမှာဆို ချွေးထွက်လွန်ပြီး အရေပြားယားယံခြင်းကြောင့် အနီကွက်များ အင်ပြင်များ ထွက်လေ့ရှိတာမို့ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။ သင့်အရေပြားကို ယားယံစေတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်လို့ ဆက်လက်ဖတ်ရှုကြည့်ပေးပါ။ (၁) အသားအရေ အလွန်ခြောက်သွေ့ခြင်း အလွန်ခြောက်သွေ့သော အသားအရေဟာ အလွယ်တကူ ယားယံမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ (၂) ကြမ်းပိုးကိုက်ခြင်း ခြင်ကိုက်ခြင်းကြောင့် ယားယံခြင်းဟာ သိသာလွယ်ပြီး ပျောက်ကင်းဖို့လည်း မြန်ဆန်ပါတယ်။ ကြမ်းပိုး ကိုက်ခံရတဲ့အခါမှာတော့ နေထိုင်မရအောင် ယားစေတဲ့အပြင် ပျောက်ကင်းဖို့လည်း ကြာတတ်ပါတယ်။ ကြမ်းပိုးအပြင် ကြွက်သန်း၊ ခွေးသန်းတို့လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ (၃) အရေပြားယားယံစေသောရောဂါများ အရေပြားရောင်ရမ်းရောဂါ …
KTV တစ်ခု ထဲ တွင် ဖြစ်သည်
သေချင်းဇိုးကြီး…ငါ့ ကို ညာ ကိုင်သွားတယ် (KTV တစ်ခု ထဲ တွင် ဖြစ်သည်) KTV တစ်ခု ထဲ တွင် ဖြစ်သည်။ ကိုဇိုကြီး သည် မိုက်ကိုင်ထားသော ကောင်မလေး ကို ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်၏။ ကောင်မလေးက ရုန်းကန်မည် ပြုသောအခါ.. “ညီမ နားကပ်လေးက သေးလွန်းတော့ ညီမ နဲ့ မလိုက်ဘူး၊ ကိုကြီးက ဒီထက်ကြီးပြီး လှတာလေး လုပ်ပေးတတ်တယ်သိလား” ကောင်မလေးက မရုန်းကန်တော့ပဲ မျက်လွှာလေး ချထားလိုက်သည်။ ကိုဇိုကြီး က ကောင်မလေး၏ မေးစေ့ကို လက်ဖြင့် အသာမလိုက်ပြီး နှာခေါင်းကို ရှေ့တိုးလိုက်၏။ ကောင်မလေးက အလိုက်သင့် ရှောင်တိမ်းရန် ပြင်လိုက်စဉ် …
ရဲယိုသီးရဲ့ ကောင်းခြင်း ရဲယိုသီးကို များသော အားဖြင့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အကျိုးများစွာ ရှိကြောင်း သိသော်လည်း အလှ အပနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို အကျိုးတွေ ရှိကြောင်း သိသူလည်း ရှိနိုင်သလို မသိသူလည်း ရှိနိုင်ပါတယ် ။ ရဲယိုသီးဟာ အရေပြား အတွက်အကျိုးများစွာ ရရှိစေသလို ဆံပင်အတွက် လာ်းအကိုး ရှိစေပါတယ် ။ ပုံ သဏ္ဍာန် မလှ အနံ ဆိုးသော်လည်း အလှအပ အတွက် အကျိုးရှိစေတာမို့ သိစေချင်ပါတယ် ။ ဝက်ခြံနဲ့ရဲယို ရဲယိုသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ အင်တီအောက်ဒင့် ဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင် များစွာဟာ ရောင်ရမ်းမူှကို လျေ့ာချပေးပါတယ် ။ ဘက်တီးရီးယား …
မကောင်းမှု ဟူသည် မျက်ကွယ်ရာမရှိ ဟက်…. ဟက်
မကောင်းမှု ဟူသည် မျက်ကွယ်ရာမရှိ ဟက်…. ဟက် ကိုကျော် တယောက် သတင်းစာဖတ်နေတုန်း သူ့မိန်းမက ခေါင်းကို ဒန်အိုးနဲ့ ထုချလိုက်တယ်။ ဒန်းးးးအသံကြားလိုက်ရတယ် ကိုကျော် ခမြာ ခေါင်းတော်တော်မူးသွားတယ်။ ” ဘာဖြစ်လို့လဲကွ” ” ရှင့်အိတ်အထဲမှာ စာရွက်တခုတွေ့တယ်။ ယမုံ လို့ ရေးထားတယ်” ” ဟာကွာ အဲဒါ ပြည့်စုံ အိမ်က ခွေး နာမည်ပါ” အော် ” Sorry နော်” ဟင်း….. ၃ ရက်လောက်ကြာတော့ ကိုကျော် ညဘက် တီဗွီ ကြည့်နေတဲ့အချိန်. . . (((((ဒိန်းဂလိန်းဂလိန်း)))))) မိန်းမဖြစ်သူက ခေါင်းကို အရင်တခါ ဒန်အိုးထက် ပိုကြီးတဲ့ …
သွေးသား နှင့် အရိုး ကျန်းမာရေးတို့ အတွက် ဇီးသီးခြောက်
သွေးသား နှင့် အရိုး ကျန်းမာရေးတို့ အတွက် ဇီးသီးခြောက် အမျိုးသမီးများ အရိုးကျန်းမာရေးနဲ့ ဆီးသီးခြောက် အရိုးအတွက် ဆီးသီးခြောက်( Dried pulms )က ကောင်းကျိုး တစ်ခုပေးပါတယ် ။ နေ့စဉ် ဆီးသီးခြောက် ၁၀ လုံးကို တစ်နှစ်ကြာ စားတဲ့ခါ လူလတ်ပိုင်းအရွယ် အသက်အရွယ် အမျိုးသမီးတွေမှာ အရိုးအားနည်းတာ သိသာစွာ နှေးကွေးသွားတယ်လို့ Florida State University မှ ဒေါက်တာ ဘာရင်မ်းအာ့ဂျ်မင်ဒီက ဆိုတယ်။ ဆီးသီး ၁၀ လုံးကများတယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ ၃ လုံးစားရင်တောင် ထူးခြားမူ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ် များစွာ လေ့လာချက်အရ တွေ့ရှိရသည်မှာ ဆီးသီးခြောက်တွေက …
ရှားစောင်းလက်ပတ်နှင့် အသားဖြူအောင် ဓာတုပစ္စည်းတွေမသုံးဘဲ သဘာ၀ လုပ်နည်း
ရှားစောင်းလက်ပတ်နှင့် အသားဖြူအောင် ဓာတုပစ္စည်းတွေမသုံးဘဲ သဘာ၀ လုပ်နည်း ဓါတုပစ္စည်းတွေကို သုံးပြီး အ သားဖြူအောင် လုပ်မှာ ထက်စာရင်တော့ သဘာဝနည်း ကို သုံးပြီး ကြိုးစားကြ ည့်တာက ပိုပြီးတော့ အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ အသုံးပြုရမယ့် ပစ္စည်း ကလည်း တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ပါ။ ရှားစောင်းလက် ပတ်ကို အသား ဖြူဖို့အတွက် ဘယ်လို မျိုး အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ (၁)ရှားစောင်းလက်ပတ် တစ်မျိုးတည်းကို သုံးပြီး ဖြူအောင် လုပ်နည်း ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို နှစ်ခြမ်းခွဲပါ။ ပြီးရင် ဂျဲလ်ကို ထုတ်ပြီး ဇွန်း(သို့) ခရင်းနဲ့ ခြစ်ထုတ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ မျက်နှာမှာ လူးပေးပြီး(၁၀)မိနစ်ကြာအောင် ထားပေး ပါ။(၁၀)မိနစ်လောက် ပြည့်ရင်တော့ ရေအေးနဲ့ …
မိန်းမရင်သားကို ကိုင်လိုက်တာနဲ့ အသက်အတိအကျ ပြောနိုင်တဲ့ ဆရာကြီးကိုမှ ပညာစမ်းမိတဲ့ ဘောစိမမတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ် ဘောစိမမတယောက်…သူ့မရဲ့လေးဆယ့်ငါးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ အလှပြင်ဆိုင်ကိုသွားပြီး ….မျက်နှာပေါ်ကအရေးအကြောင်းတွေကို ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်။ ပိုက်ဆံတော်တော်ကုန်သွားပေမဲ့မှန်ထဲမှာမြင်နေရတဲ့…သူမရဲ့နုပျိုနေတဲ့မျက်နှာလေးကိုတွေ့တော့ကျေနပ်ပြီးပြုံးနေတယ်။ ရုပ်ကနုပျိုသွားတော့…သူမရဲ့စိတ်ကလည်းလန်းဆန်းတက်ကြွလာပြီး…အိမ်ပြန်လမ်တလျှောက်လုံးမှာ… သူမရဲ့ဟန်ပန်အမူအရာတွေက တကယ့်ကို…ဖျက်လတ်သွက်လတ်နေတာပါ။ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု့မြင့်မားလာခြင်းနဲ့အတူ…တပါးသူတွေရော သူမအပေါ်…ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာ…သိချင်လာတယ်။ အာ့နဲ့..ဖိနပ်ဆိုင်ထဲဝင်သွားပြီး…ဖိနပ်တရံဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာ…အရောင်းဝန်ထမ်းကောင်လေးကိုမေးလိုက်တယ်။ 👩” ဟိတ် ! မမတခုမေးရင်မောင်လေးစိတ်မဆိုးဘူးထင်တယ်” ” မမ အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ သိလား ” ” ၃၂ လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ် မမ ” ” အို ! မဟုတ်ပါဘူးမောင်လေးရယ်” ” ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါနော် မွမွ ” ဆိုင်ထဲကထွက်လာချိန်မှာတော့သူမဟာ ပီတိနဲ့အတူတိမ်တွေကိုစီးမျောနေရသလိုပါ။ နောက်ထပ် KFC ဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။ ကောင်တာကကောင်မလေးကို သူ့အသက်ကို…ခန့်မှန်းခိုင်းပြန်တယ်။ ” …
ဆံပင်အရှည်နဲ့ကောင်မလေးတွေကို ကောင်လေးတွေပိုပြီး မြတ်နိုးရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ချစ်သူရဲ့ဆံနွယ်အရှည်တွေဟာ ကိုကိုပုရိသတို့အတွက်တော့ စိတ်ကူးယဉ်ပန်းခင်းကြီးပါပဲ ချစ်သူရဲ့ဆံနွယ်အရှည်တွေဟာ အမျိုးသားတွေအတွက်တော့ လဲလျောင်းချင်စရာ နူးညံ့လွန်းတဲ့ ကတ္တီပါကောဇောတစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ဆံနွယ်ရှည်တွေကို ကိုကိုတို့ဟာ ကာယကံရှင် တွေထက် တောင် ပိုပြီးသည်းသည်းလှုပ်တတ်ကြပါသေးတယ်။ ဆံပင်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာပြင်ပါ လှပလွန်း တဲ့ ကေသာတွေဟာ အမျိုးသားတွေရဲ့အချစ်ကို ဆွဲဆောင်ဖို့ 80% လုံလောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ထက်ကိုယ့်ရဲ့ဆံပင်ကိုပိုပြီး ချစ်နေတယ် ဆိုရင် ပျိုမေတို့အနေနဲ့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ ဒါဟာပျိုမေတို့ကိုချစ်လို့ ပျိုမေတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတွေအကုန်လုံးကို ချစ်တဲ့သဘောပါပဲ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ချစ်စရာ အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းလေးကို ကိုကိုတို့အနေနဲ့ တန်ဖိုး ထားမြတ်နိုးတယ်ဆိုတာ သဘာဝပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူလေးကို တန်ဖိုးထားတဲ့ အပြင် သူ့ရဲ့ဆံနွယ်တွေကိုပါ ဂရုစိုက်ဖို့ဆိုတာ …
ဖက်တီးမလို့ လှောင်ပြောင်မှုတွေကို မြင်သူတိုင်း ငေးမောရမည့် စွဲဆောင်မှုရှိသော မိန်းမလှလေး ဖြစ်သွားအောင် ပြုလုပ်ပြီး ကလဲ့စားချေလိုက်သည့် မိန်းမချောလေး လောကကြီးတွင် လူသားတို့၏ သဘောသဘာဝအရ တစ်ဖက်သားကို ဖိနှိပ်ပြောဆို ဝေဖန်မှုများ ပြုလုပ်တတ်ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ Kim Nhiet အမည်ရှိသော အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးသည် အစပိုင်းတွင် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်စုစုပေါင်း ၄၈ ကီလိုဂရမ် ရှိနေပြီး ဝိတ်ကျဆေးများ သောက်ခဲ့သော်လည်း မကျသည့်အပြင် ၆၅ ကီလိုဂရမ် အထိမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဝိတ်တက်ပြီး ဝလာသည်နှင့်အမျှ သူငယ်ချင်းများအပြင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှလည်း အထင်သေးကာ ဝေဖန် ရှုံ့ချနေကြခြင်းကို သည်းမခံနိုင်တော့ပဲ ဝိတ်ချရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ မိန်းကလေးဟာ …